अब कोरोना टेस्टको नतिजा १५ देखि २० मिनेटमै आउनेछ : डब्ल्यूएचओ:: Naya Nepal
अब कोरोना टेस्टको नतिजा १५ देखि २० मिनेटमै आउनेछ : डब्ल्यूएचओ
१३ असोज, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण गर्ने नयाँ टेस्टले गरिब तथा कम आम्दानी भएका मुलुकमा संक्रमण पहिचान गर्ने क्षमता तीव्र गतिमा बढ्नसक्ने बताएको छ । विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १० लाख नाघेसँगै डब्ल्यूएचओले यस्तो बताएको हो । विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमध्ये आधाभन्दा धेरैको मृत्यु अमेरिका, ब्राजिल, भारत र मेक्सिकोमा भएको छ ।
डब्ल्यूएचओका अनुसार नयाँ परीक्षणको खर्च केवल पाँच डलर पर्न आउँछ । जसको कारण स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालाको अभाव भएका मुलुकमा यो परीक्षण निकै महत्वपूर्ण रहन सक्छ । डब्ल्यूएचओका अनुसार यस किसिमको परीक्षण गर्न सक्ने प्रविधिको विकास गर्ने कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार अबको ५ महिनामा १२ करोड मानिसको कोरोना परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रेयेससले नयाँ प्रविधिले १५ देखि २० मिनेटमा कोरोना परीक्षणको नतिजा दिने बताएका छन् । औषधि निर्माता एबोट एण्ड एसडी बायोसेनरले बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेसनसँग मिलेर १२ करोड टेस्ट्स तयार पार्ने सहमति जनाइसकेको छ ।
नयाँ परीक्षणबाट विश्वका १३३ मुलुक लाभान्वित बन्ने बताइएको छ । जसमा ल्याटिन अमेरिकाका धेरै मुलुकहरु पनि समावेश छन्, जहाँ उल्लेख्य मात्रामा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । डब्ल्यूएचओका महानिर्देशकले अहिले कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेका मुलुकका लागि यो परीक्षण महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्ने बताएका छन् ।
व्यापारिक सम्बन्ध सुरुआतको १४८ वर्षपछि नेपालसँग के चाहन्छ चीन ?
१३ असोज, काठमाडौं । नेपाल-चीन औपचारिक व्यापारिक सम्बन्ध सुरुआतको १४८ वर्षपछि आज पहिलो सह-सचिवस्तरीय व्यापार वार्ता हुँदैछ । विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रको दाबीसहित संसारभर व्यापार साम्राज्य फैलाइरहेको चीन नेपालसँगको उच्चस्तरीय वार्तामा चार वटा विषयमा छलफल गर्न तयार छ ।
मंगलबार मध्याह्न १२ बजे सुरु हुने दुवै देशको वाणिज्य सहसचिवस्तरीय पहिलो बैठकमा चीनले नेपालसँगको व्यापारिक वातावरणमा सुधार गर्ने विषय पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । विभिन्न कारणले अवरोध हुने दुई देशबीचको अवरोध चिर्न चिनियाँ पक्षले पहल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ ।
प्रमुख नाका जोड्ने स्याफ्रुबेंसी रसुवा सडक स्तोरन्नती परियोजना अघि बढाउने विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरुले नेपालसँग छलफल गर्न चाहेका छन् । कमजोर नेपाली बोर्डर पोइन्टहरुको स्तरोन्नतीको विषय पनि बैठकको एजेण्डाको रुपमा चीनले प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै चाइना इन्टरनेश्नल आयात एक्स्पोमा नेपालको सहभागीताका विषमा पनि चीनले नेपालसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
बैठकमा छलफल गर्न नेपालले भने झण्डै दर्जन हाराहारी एजेण्डा बनाएको छ । दुई देशबीचको व्यापारीक सम्बन्धको समीक्षा, नाकाको पूर्वाधार तथा सहजीकरण, व्यापार तथा पारवहन सन्धि कार्यान्वनयको अवस्था र व्यापार वृद्धि नेपालको प्रमुख मुद्दा भएको नेपाली वार्ता टोलीका संयोजक वाणिज्य सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । ‘नेपाल–चाइना व्यापार अवस्था, व्यापारका अवरोध र सुविधा, विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा आपसी सहयोग लगायतका विषय ऐजेण्डामा समेटिएका छन्,’ सहसचिव दाहालले भने ।
दुई देशबीचको ब्यापार बढाउन सीमापार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, थप व्यपारीक नाका सञ्चालनको सम्भाव्यता तथा नेपाली वस्तु निर्यातको सहजीकरण लगायतका विषय पनि बैठकका प्रमुख विषय भएको उनको भनाइ छ ।
भर्चुअल वार्तामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र, अर्थ, गृह, भौतिक, कृषि विकास मन्त्रालय तथा भन्सार र खाद्य विभागका अधिकारीहरु सहभागी हुनेछन् । यसअघि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत वाणिज्य अधिकारीसँग मात्रै नेपालको व्यापार वार्ता हुने गरेकोमा चिनियाँ वाणिज्य व्यापार मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय वार्ता पहिलो पटक हुन लागेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुल निक्षेपमा मुद्दतिको अंश ५० प्रतिशत नाघ्यो
१३ असोज, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कुल निक्षेपमा मुद्दति निक्षेपको अंश ५० प्रतिशत नाघेको छ । पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको कुल निक्षेपमा मुद्दतिको हिस्सा गत साउन महिनामा ५०.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्दति निक्षेपको हिस्सा पछिल्लो ४ वर्ष यताकै उच्च हो । मुद्दति पछि दोस्रोमा बचत निक्षेपको अंश धेरै रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कुल निक्षेपमध्ये बचत निक्षेपको हिस्सा ३२.२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसैगरी कुल निक्षेपमा चल्तीको हिस्सा ७.७ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य निक्षेपको हिस्सा ९.५ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने बचत निक्षेपको हिस्सा निरन्तर घटिरहेको छ । मुद्दतिको हिस्सा भनेर निरन्तर बढिरहेको छ । पछिल्लो ४ वर्ष यता यो क्रम जारी रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
उनका अनुसार २०७३ असारमसान्तमा कुल निक्षेपमा बचतको हिस्सा ४३.३ प्रतिशत रहेको थियो । २०७४ असारमा घटेर ३५.४ र २०७५ मा घटेर ३४.४ प्रतिशत कायम भयो । बचतको हिस्सा कम हुने क्रम रोकिएन । २०७६ असार मसान्तमा घटेर ३२.८ प्रतिशतमा रहेको बचतको हिस्सा २०७७ असार मसान्तमा आइपुग्दा घटेर ३१.९ मा पुगेको छ ।
बचत निक्षेपको घट्ने क्रममा भए पनि मुद्दति निक्षेपको ५ वर्षदेखि नै बढ्ने क्रममा छ । कुल निक्षेपमा मुद्दतिको हिस्सा २०७३ असार मसान्तमा ३०.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ मा बढेर ४३.२ प्रतिशत पुग्यो । २०७५ असार मसान्तमा ४४.८, २०७६ असारमा ४६.३, २०७७ असारमा ४८ प्रतिशत हुँदै साउनमा ५०.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
यहाँ चल्तीको हिस्सा भने २०७४ मा ८.७, २०७५ मा ९.३, २०७६ मा ९.७ हुँदै २०७७ असार मसान्तमा १० प्रतिशत पुगेको छ । यसबाहेकका अन्य निक्षेपको हिस्सा २०७४ मा १२.७ प्रतिशत हरेकोमा यो घटेर २०७७ साउन मसान्तमा ९.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत !
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट मुद्दति निक्षेपको हिस्सा बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताउँछन् । अन्य निक्षेप भन्दा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा धेरै हुँदा अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
निश्चित समयसम्मका लागि निक्षेप आउने भएकाले रकम परिचालनका लागि पनि राम्रो हुने उनी बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि मुद्दति बढ्नु राम्रै हुने बताउँछन् ।
पछिल्लो ५ वर्ष यता सर्वसाधारण ग्राहकमा सचेतना बढेको र बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा पनि बढेकाले कुल निक्षेपमा मुद्दतिको हिस्सा बढ्दै गएको बताए । धेरै ब्याजदर दिनुपर्ने भएकाले बैंकको लागत यसले बढाए पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रै हुने उनले बताए ।